“I ngengozi kusula ezinye izithombe yimuphi umcabango alayishiwe, kodwa engakwazi. Ngiyazi ukuthi computer ngeke ususe ngokugcwele idatha ngokuvamile. Ngabe isebenza Ikhadi le-SD ngendlela efanayo? Yini engingayenza ukuze ngithole izithombe zami emuva? ”
Abantu abaningi bangase nazo izinkinga ngenhla, ukusulwa ezinye izithombe ezibalulekile ngephutha. Ngakho nendlela kutholakale izithombe kusuka ikhadi le-SD?
Siyazi ukuthi uma ususa nokuqukethwe ezinye on drive hard, it is hhayi lingasekho, the computer nje uphawu isikhala njengoba ezisebenzisekayo aphinde bese ukubhala phezu kwalo kamuva. Ikhadi le-SD kuyefana drive kanzima, ungasebenzisa Software SD Card Lokubuyisela ukuze uthole idatha yakho emuva, ahlanganisa izithombe zakho ususiwe.
Inguqulo Icala Thwebula Data Reocvery noma Data Recovery for Mac bese uyifake.
Fumana Lost noma usule Data kusuka SD Card in 3 izinyathelo
Step 1: Hola lolu hlelo bese ukhethe imodi alulame
Run the alulame idatha emva ukufaka isofthiwe kwikhompyutha nawe. Khetha "Ifayela Lost Lokubuyisela" Imodi ukuqala.
Step 2: Khetha lakho Ikhadi SD ubhekisise kuso
Uzobona uhlu lwabo bonke drive kanzima kanye drive esusekayo. Khetha ikhadi le-SD bese uchofoze inkinobho "Qala" ukuqala inqubo scan.
Step 3: Alulame izithombe asusiwe
Isofthiwe kuyokwenza scan lakho ikhadi le-SD bese sibonise imiphumela ohlwini, wonke amafayela lost kwakuyosekelwa ihlelwa izigaba, thola nje okufunayo futhi uchofoze "Phinda" inkinobho ukuze uthole izithombe zakho emuva.
Amathiphu: Ungahlola kuqala izithombe ohlwini ngaphambi ululama, futhi "Isimo" ohlwini limele ithuba lokululama. Isibonelo, "Excellent" kusho cishe ukuba abuyiselwe kuba.
Posted on July 29, 2013 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba alulame idathaAmathegi alulame izithombe isusiwe sd ikhadi, alulame izithombe kusuka ekhadini le-SD, alulame sd ikhadi
Langaphambilini post Previous: Indlela ukuze alulame elilahlekile noma ususiwe Imibhalo Word
Next post Next: Indlela ukuthola izithombe kusuka ihlelwe yememori card